Macallinnimo Ma Dhib-baa? | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Marki aad ku soo biirto wax barista waxa aad dareemeysaa mas’uuliyad weyn in aad qaadday, in aad qeyb kanoqaneyso wax soosaarka dalkaaga, gaar ahaan hantida ugu qaalisan oo ah dadka(Ardayda), haa dad ayaad waxbareysaa, waxbaristaas waxa ey noqaneysaa mid loo aayo oo noqoto in dad tayo leh aad soosaarto.
Balse waxaa jiro caqabado badan oo kaaga imaanaya Macallimiinta kaaga horreysay waxbarista!
Sidee ayay macallimiinta caqabad ugu noqanayaan macallimiin kale oo cusub?
Dabcan Macllinka waa shaqsi bulshada laga dhax jecelyahay oo maamuus iyo sharaf ku dhax leh, balse dadka Macallinnimada ku shaqeeya qaarkood kuma qanacsana shaqada ey u hayaan bulshada, sababtoo ah waxaa jiro warar lagu liido shaqada Macallinimada, tusaale “Macllin dabkiisaan damin maahee taajir maahan”.
Taas owgeed waxa aad arkeysaa Macallimiin kaaga horreeyay howsha oo kugu leh “Maxaad Macallin unoqotay annagaaba wax ka keeni weynay!! Waxa laga keeni waayay ee laguu sheegayo waa dhaqaale? Annaga ayaan dhaqaale kuheysan ayay kulleeyihiin!
Saakay mar’aan saarnaa gaariga dadweynaha ayaan maqlay qof leh “Macallinnimo wax tari meysaa soco aad tababarka ey hey’adda bixineyso, waan fiiriyay waxa uu ahaa Oday da’ dhaxaad ah markii uu taleefanka damiyay ayuu yiri “ Macallinnimo maxaa laga dheefaa annagaaba wax kakeeni weynee! Oday ag fadhiyay ayaa kuyiri “Macallinnimo waa xamaali uun”!.
Waa shaqo aan aad ujeclahay, waxa aan aad ufarxaa marki aan arko arday igu leh “Macallin ereygaan maxaa laga wadaa?!! Waxa aan ku kalsoonahay arday dhaxal gal ah in aan soosaari karo, arday kastaa wixi lagu shubo ama aqoon ahaan loo siiyo waxa ey qeyb katahay inta uu aaminsanyahay.
Faa’iidada Shaqadaan Macallinimada ah:
Waa meesha laga sameyn karo isbeddal dhab ah.
Waxa aad qaabeyn kartaa qaabka waxbarashada Mustaqbalka ee Dalkaaga.
Bulshada aqoontooda ayaad si sax ah udhisi kartaa.
Adiga ayaa aqoontaada dhiseya.
Dalkaaga in uu dunida usarreeyo ayaad abuuri kartaa.
Aragtida qaldan maxaa loogu qaatay?
Xaqiiqdii qof waliba ee haaya shaqo uusan ku qanacsanayn dhaqale ahaan ama shaqo ahaan, waxa eyrabtaba ha’ahaatee waxaan ognahay in uu qofkaas shaqadiisa jeclaanayn, balse Macallinnimada waxa ey u muuqataa mid xoogaa yara adag sababtuna waa mushaarka lagu qaato oo yar taas ayaan isdhihi karaa waxa looga cararay shaqada Macallinnimada!
Aqristoow maxay kula tahay adiguna?
F.G: Shaqada Macallinnimada kuma habboona qof kasta balse waxa ey kuhabboontahay qof ey ka go’antahay in uu dalkiisa u soosaaro jiil aqoon iyo hadaf leh.
Tags: Macallinnimo ma dhib-baa?
Next post Tallaalka Maxuu U Taraa Ilmaha?
Previous post Waa Maxay Halista ugu Badan ee Cudurkaan Qatarta ka Dhigay? Covid-19